>Copy & Paste , Ctrl + C / V ကိုသတိထားရန် | Myanmar Collection
← >ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ လေဘေးသင့် ပြည်သူများ လုပ်အားကို ခေါင်းပုံဖြတ်
>ကိုးကြိမ်မြောက် City FM ဆုပေးပွဲ →
>Copy & Paste , Ctrl + C / V ကိုသတိထားရန်
ဥပမာအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်1) Copy any text by ctrl+c2) Click the Link: http://www.friendlycanadian.com/applications/clipboard.htm3) ဒါဆိုရင် မိမိ copy ကူးထားလိုက်တဲ့ စာသားကို ၄င်း webpage မှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ password, creditcard numbers, pin စသည်တို့ကို မိမိအင်တာနက် သုံးနေစဉ် copy မလုပ်ပါနဲ့။ မိမိရဲ့ clipboard မှ အလွယ်တကူ ခိုးယူနိုင်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။ဒါကလည်း အခုအချိန်မှာ firefox မှ လွဲပြီး အခြား browser တွေမှာ ဖြစ်တာများပါတယ်။ Browser တိုင်းမှာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ script တွေကို access လုပ်မယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာ Inform လုပ်ပေမဲ့ user တိုင်းက message ကို တော်တော်နဲ့ မဖတ်တတ်ပါဘူး။ yes or no ဆိုရင် ” yes” လိုက်တာပဲ။ allow or disallow ဆိုရင် “allow” လိုက်တာပဲ။
ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ IE မှာဆိုရင်အောက်ပါအပိုင်း setting လုပ်မယ်။
1. Go to internet options->security2. Press custom level3. In the security settings, select disable under Allow paste operations via script.ဒါဆိုရင် လုံခြုံသွားပါပြီ။
http://www.lannthit.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
This entry was posted in Hacks. Bookmark the permalink.	← >ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ လေဘေးသင့် ပြည်သူများ လုပ်အားကို ခေါင်းပုံဖြတ်